I-China Auto EPP / ETPU / EPO Imishini yabakhiqizi nabahlinzeki | Welleps
能量 吸收 ： 由于 EPP 制品 具有 特殊 的 泡 孔 结构 ， 其 通过 泡 孔 中 的 气气 滞留 和 压缩 作用 来 吸收 吸收 逸散 能量 ， 具有 优异 的 抗压 性能
I-EPP (I-Expanded Polypropylene) iyinhlobo yokusebenza okuphezulu kwe-crystalline polymer / igesi ehlanganisiwe, nokusebenza kwayo okuhle kakhulu ukuthi kube ukuvikeleka kwemvelo okukhula ngokushesha kakhulu nezinto zokwambathisa.
Ukumuncwa kwamandla: ngoba imikhiqizo ye-EPP inesakhiwo esikhethekile se-bubble pore, ingamunca amandla avela ngaphandle kahle, futhi ingaphikisana nokucindezela kahle kakhulu.
Ukuphinda kusetshenziswe kabusha: Imikhiqizo ye-EPP ukuguquguquka okuhle ingasetshenziswa kaninginingi, hhayi ukuphuka kalula.
I-EPP 制品 的 应用 领域 广泛 ， 主要 应用于 汽车工业 领域 ， 如 汽车 保险杠 ， 汽车 侧面 防震 芯 ， 汽车 车门 防震 芯 ， 高级 安全 汽车 座位 椅 等。
Imikhiqizo ye-EPP esetshenziswa kabanzi embonini yezimoto, njengebhayisikili yemoto, umgogodla ohlangothini lwemoto, umnyango, isihlalo semoto sokuphepha esithuthukile, njll.
IMISEBENZI EBALULEKILE YALOMSHINI
Ukuhlalisa ngomkhiqizo ohlukile, lo mshini wokujova unezinhlobo eziningi zepuleti lesikhunta, i-min, ubukhulu buzungeze i-600 × 800 mm nobukhulu. Ubukhulu bufinyelela ku-1200 × 1400 mm. Lo mshini unamasistimu ama-hydraulic anezigaba ezimbili, uhlelo lokuphakela olucindezelweyo, nohlelo lwamandla aphakathi, i-relief damper, ithangi lamanzi elinengcindezi, uhlelo lwe-condensation, uhlelo olulawulwa yikhompyutha, uhlelo lokulawula inqubo yedijithali negumbi lomusi.
Lolu hlelo aludingi okokuthambisa. Isilinda se-hydraulic sifakwe ezinhlangothini zombili zembubhiso nangamandla okubopha isikhunta. Idome engagqwali ingabamba ukushisa. Ukuvulwa kwesikhunta nokuvalwa kwesikhunta kuphethwe uhlelo lwekhompyutha olungaqinisekisa ukunemba okungcono kakhulu kokudla. Ukunyakaza kokukhishwa kwesikhunta kulawulwa uhlelo lokukhishwa ukuze unikeze ikhwalithi engcono kakhulu yomkhiqizo wokunemba ngesikhathi senqubo yokukhipha.
UKUHLELWA KWALO MSHINI
Lo mshini waklanywa njengendawo evulekile enamacala amathathu. Lo mklamo ovulekile uzoqinisa inqubo yokushintsha isikhunta futhi opharetha bangashintsha isikhunta ngaphambili, emuva nasezinhlangothini ezimbili zalo mshini. Futhi, lo mshini ungabekwa ngqo phansi ngaphandle kokusetha noma iyiphi ipulatifomu. Ukuvikela ukuphepha ko-opharetha, lo mshini ufakwe umnyango wokuphepha nohlelo lokuphepha.
Lesi sikhunta senziwa ngefomethi yamapuleti amathathu. Amandla amaningi angagcinwa ngaphandle kokubhujiswa ngakho-ke, ipuleti lesikhunta lingasetshenziswa kakhulu. Izikhonkwane zomholi nesibhamu sokufafaza kufakwe ngaphakathi kwamapuleti okuhamba kwesikhunta ukuqinisekisa ukuphepha kokusebenza. Ukwehlisa isikhathi sesithixo, lolu hlelo lunikeza ukufakwa kwesikhunta ngokushesha nokushintsha uhlelo.
Izinyathelo ezimbili zohlelo lwe-hydraulic luhlinzeka ngezindlela ezimbili zejubane (ezisheshayo futhi ezihamba kancane) zokuvalwa kwesikhunta nokuvulwa kwesikhunta. Futhi, isikhathi sokucubungula sinciphile.
UHLELO LOKUPHAKATHI KWAMANDLA
Lo mshini uneqoqo elilodwa eligcwele lesistimu yamandla emaphakathi ekhiqizwa yinkampani yethu Yonke umusi nomoya okudingekayo ngesikhathi senqubo yokujova kulawulwa yi-central system valve valve. Lolu hlelo luzohlinzeka ngokungenisa umoya futhi lungaguqulwa lula. Lolu hlelo lwe-steam olunengcindezi ephansi lwakhiwe ngamapayipi nama-valve akhulisiwe anganikeza isimo sokusebenza esihle kakhulu.
UMONAKALO WOKUZIPHATHA KWENGCindezelo
Ukulungiswa kwengcindezi yamandla kubaluleke kakhulu. Ngaphansi kwengcindezi ephakeme yomusi, isikhathi sokukhiqiza sizokwandiswa futhi sidle amandla amaningi. Kodwa-ke, umkhiqizo wokugcina ungakhubazeka futhi ukubonakala komkhiqizo kungathinteka lapho ingcindezi iphansi kakhulu. Isidambisi sosizo sisebenza lapho kukhululwa isikhunta nokushisa isikhunta. Umoya ocindezelweyo usetshenziselwa ukugcwalisa futhi le damper izonciphisa ukusetshenziswa kwamandla futhi inikeze umkhiqizo osezingeni eliphakeme.
ITHANGI LAMANZI LOKUPHATHA-Ukucindezela
Imishini ifakwe isethi eyodwa yokubamba ingcindezi yamanzi hank enokufaka okubili okuhlukile kwamanzi okupholisa ne-condensate.
Uhlelo lwe-vacuum lufakwe ipompo ye-Liquid Ring Vacuum kanye ne-condenser enikezela nge-vacuity esebenza kahle. Ngaphandle kwesinyathelo esingeziwe sokomisa, singasheshisa umjovo ngaphansi kwalolu hlelo lwe-vacuum. Ukukhishwa kwesikhunta kulula ukugcwaliswa futhi futhi kusindisa amandla amaningi.
UHLELO LWE-COMPUTER OLULAWULWA
Lo mshini wokujova ufakwe uhlelo olulawulwa yikhompyutha olunemisebenzi yokuhlela nokwanda. zonke izinyathelo zokusebenza zilawulwa ngokunembile ukutholwa kwephutha lohlelo lwekhompiyutha futhi izinkomba ziboniswa esikrinini Yonke imodeli ifakiwe ngalolu hlelo lokubala olubonisa izinqubo, ukusethwa kwesikhathi nezinto eziza kuqala ku-valve yokulawula ukucindezela kuzosetha ingcindezi.
Asikwazi ukuklama umshini ngokuya ngemfuneko yemininingwane yekhasimende.
Langaphambilini Umumo Wokubumba Okuzenzakalelayo Nge-Vacuum
Olandelayo: I-EPP (I-Polypropylene Enwetshiwe)